::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather साउदी सरकारको नियमको स्वागत:: Rojgar Manch ::
साउदी सरकारको नियमको स्वागत
शुक्रवार, २०७४ पुस ०७ गते २२:२९
साउदी अरबको सरकारले यहाँका महिलालाई सवारी चालन अनुमति दिएको निर्णयको यहाँका महिलाले स्वागत गरेका छन् । साउदी अरेबियाको ट्राफिक कार्यालयले साउदी महिलाहरुलाई पनि सवारी साधन हाँक्न पाउने सवारी अनुमतिपत्र दिने निर्णय हालैमात्र गरेको थियो ।
विशेषगरी उनीहरुलाई यसअघि नभएको ट्रक र मोटरसाईकल चलाउनेसम्बन्धी व्यवस्थालाई यस सरकारले अनुमति प्रदान गरेको छ । उक्त निर्णयको यहाँका महिला अधिकारवादीहरुले स्वागत गरेका बताइएको छ ।
सरकारले सो नियम गतवर्ष मात्र बनाएको थियो । यसरी सवारी सञ्चालन गर्न पाउने अधिकारको प्रचलन औपचारिक रुपमा सन् २०१८ को मध्यतिरबाट सुरुहुने बताइएको छ । साउदी अरबका अखबारहरुले यहाँका महिलाले सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत गरेका जनाएका छन् ।
साउदी अरबका राजा सल्मान बिन अब्दुलाजिज अल साउदले गत सेक्टेम्बरमा महिलाहरुलाई चालक बन्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा गत हप्तामात्र यो निर्णय भएको हो ।
साउदी अरेबियाका महिलाहरुलाई यसअघि सवारी साधान चलाउन नपाइने व्यवस्था थियो । अब यो नयाँ निर्णयपछि भने यहाँका महिला खुसी भएको बताइएको छ ।
साउदी अरबमा अधिकारवादीहरु तथा विशेष गरेर महिला अधिकारकर्मीले यहाँका पुरुषले सरह नै महिला पनि सवारी चालक बन्न पाउनुपर्ने मागगर्दै विगत लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
अरु देशहरुका तुलनामा मुस्लिम देशका महिलामा बढी सांस्कृतिक जटिलताहरु रहेको पाइन्छ । त्यसैले यहाँका महिलालाई अन्य मुलुकका तुलनामा पछिमात्र राजनीतिक अधिकार दिइएको हो ।
76. ललितपुर क्षेत्रका संघको उम्मेदवारलाई आज शुभकामना
77. स्थानीय निर्वाचनले संघको चुनावी रौनकता सेलाउँदै
78. साउदीमा राजदूत राजपुतको स्वागत
79. संघ निर्वाचनमा ढकाल नेतृत्वको संयुक्त ब्यवसायी समूहद्धारा उम्मेदवारी घोषणा
80. ‘बिहान ५ बजेदेखि राति १२ सम्म भोट माग्नेहरु अरु बेला पनि सक्रिय हुनुहोस्’ :बरिष्ठ व्यवसायी केसी
81. ओमानबाट प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र
82. क्यान्सर पीडित गौतमलाई कात्तिकेदेउराली समाज कोरियाको सहयोग
83. राजदूत बस्न्यातद्धारा मलेसियामा गोर्खालीले देखाएको साहसको प्रशंसा
84. साउदी अरेविया, बहराइन, युएई र इजिप्टद्वारा कतारसँग कुटनीतिक सम्बन्ध अन्त्यको घोषणा
85. ओमानमा गणतन्त्र दिवस भब्यरुपमा सम्पन्न
86. ओमान रोजगारीमा सन्तुष्ट बनेका सापकोटा
87. ३ सय १८ नेपाली विदेशी जेलमा
88. दुवईमा नेपाली चेली रिताको हत्या
89. दुबर्इमा बस दुर्घटना, तीन नेपालीसहित आठको मृत्यु
90. कतारमा ३ कामदारको मृत्यु, एकजना नेपाली रहेको पुष्टि
91. प्रवासी नेपालीको प्रश्न नोट चल्ने भोट नचल्ने ?
92. भवन भट्टले जापानमा एकैपटक थपे १४० रेष्टुँरा
93. इजरायलमा नेपाली पर्यटनको प्रवर्द्धन
94. मलेसियामा अलपत्र परेका १८ नेपाली कामदारको उद्दार
95. भलिबल प्रतियोगितासहित नयाँ वर्षको स्वागत गरे साउदीका नेपालीले
96. कालोराडोको सडकमा नेपाली परेड
97. काभ्रे सेवा समाज युएईको नयाँ बर्ष सांस्कृतिक साँझ २०७४ सम्पन्न
98. आफ्नै ब्राण्ड कतारदेखि लण्डनसम्म बिस्तार गर्दै नेपाली युवा ब्यवसायी
99. पर्वत युवा सेवा समाज कतारमा पौडेल
100. जिसी अवैतनिक सल्लाहकार नियुक्त
Results 387: You are at page4of 16